Keating oo arrimo ka dhalan karta dib u dhacyada doorashada u gudbiyay QM - Caasimada Online
Home Warar Keating oo arrimo ka dhalan karta dib u dhacyada doorashada u gudbiyay...
Keating oo arrimo ka dhalan karta dib u dhacyada doorashada u gudbiyay QM
New York (Caasimada Online) – Wakiilka xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay u qaabilsan Soomaaliya Micheal Keating ayaa Qaramada Midoobay u gudbiyay dib u dhacyada doorashada.
Mechael Keating, ayaa Qaramada Midoobay u sheegay in dib u dhacyada doorashada ay sabab u noqon karaan labo arimood.
Labada arin ayuu ku kala sheegay iney yihiin in geedi socodka uu yahay mid qaab siyaasadeysan loo maamulay iyo in dib u dhaca sabab u yahay dib u dhacyadii kale ee horey u dhacay.
“Dib u dhaca hadda yimid wuxuu keenayaa cabsi badan, aan labo ka magacaabo, in geeddi socodkan uu yahay mid qaabsiyaasadeysan loo maamulay iyo in dib u dhacan uu yahay mid ka mid ah dib u dhacyo is xig-xigay oo horay u dhacay”
“In la sii wado qaabkii ay u dhici lahayd doorasho si cad oo la wada arki karo u dhacda lagana faa’iideysto waqtiga dheeriga ah ee la haysto.” Ayuu yiri Wakiilka Qaramada Midoobay ee arimaha Somaliya.
Walaaca kasoo baxay Qaramada Midoobay ayaa waxaa horey u muujiyay siyaasiyiin badan oo ku sugan dalka Soomaaliya.